आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग २ मा शतक प्रहार गर्ने ५ खेलाडी | | Neplays.com
आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग २ मा शतक प्रहार गर्ने ५ खेलाडी
By Neplays	 Last updated Oct 17, 2020
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग २ का खेलहरु स्थगित भएका छन् । सन् २०२० भित्र नेपालले खेल्नु पर्ने १२ वटा खेल पनि तोकिएको समयमा हुन सकेन । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्काउनका लागि पटक पटक गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । स्थगित खेलहरु कहिले शुरु गर्ने भन्ने विषयमा विश्व क्रिकेटको सर्र्वोच्च संस्था आईसीसीबाट निर्णय नआउँदा अन्योल जस्तै छ । आईसीसी विश्ल लिग खेल्ने नेपालससिहत ७ वटा देशहरु छन् ।
सन् २०२२ सम्म चल्ने यो लिगमा खेलिने १२६ खेल मध्य अहिलेसम्म ३६ वटा मात्रै खेल भएका छन् । यो लिग खेल्ने सम्पूर्ण सात टिमले ३६ वटा खेल खेल्नु पर्छ । लिगको सम्पूर्ण खेल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएकाले पनि यसको ठूलो महत्व रहेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकाले सर्वाधिक १२ खेल खेल्दा नेपालले सबैभन्दा कम चार खेल मात्रै खेलेको छ । जसमा नेपाल २ खेलमा विजयी भएको छ भने दुई खेलमा पराजय भएको छ ।
यो प्रतियोगिताका दौरान रेकर्डहरु पनि बनेका छन् । आज हामी आईसीसी लिग २ क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने ५ खेलाडीको विषयमा कुरा गर्छौं ।
१. अकुइब इल्लेयस
अकुइब इल्लेस ओमान क्रिकेट टिमका माथिल्लो क्रममा ब्याट्सम्यान हुन् । २८ वर्षीय दाँया हाते ब्याट्सम्यान इल्लेसले टिमलाई आवश्यक परेका बेला एक्लै खेल जिताउने क्षमता राख्छन् ।
उनले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा भएको त्रिकोाणात्मक सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । कीर्तिपुर मैदानमा घरेलु टोली नेपालले दिएको २५० रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा उनले शतक प्रहार गरे । योसँगै उनी ओमानका लागि एक दिवसीय क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी पनिबने । १०८ बलमा उनले नट आउट १०९ रनको पारि खेलेका थिए ।
जसमा उनले १२ चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए । लगतै सोही सिरिज अन्तर्गत अमेरिकाविरुद्ध पनि उनले शतक बनाए । सो खेलमा उनले १२३ बलको सामना गर्दै ११ चौका र एक छक्काको मद्दतले १०५ रन बनाएका थिए । यो लिगमा १० खेलमा २ शतक र चार अर्धशतक बनाएका उनी सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन् ।
जीशन मक्सुद ओमानबाट विश्व क्रिकेट लिग २ मा शतक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाडी हुन् । नेपाली दर्शकले खचाखच भरिएको त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा उनले अमेरिकाविरुद्ध व्यक्तिगत पहिलो एक दिवसीय शतक प्रहार गरेका थिए । मध्यक्रममा ब्याटिङ गर्न आएका उनले १०९ बलमा १० चौका र चार छक्का प्रहार गरे । उनले १०९ रनको लोभलाग्दो पारी खेलेका थिए । अमेरिकाविरुद्धको सो खेलमा अकिब र मक्सुद दुवैले शतक प्रहार गरेका थिए । उनीहरुका बीचमा तेस्रो विकेटका लागि २०० रनको साझेदारी पनि भएको थियो । यो लिगमा मक्सुदको नामा एउटा अर्धशतक पनि रहेको छ ।
३. असाद भाला
पपुवा न्युगिनीका ३३ वर्षिय कप्तान असाद भाला आक्रमक ब्याटिङबाट चिनिन्छन् । आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर २०१८ मा वेस्टइन्डिजविरुद्ध अर्धशतक प्रहार गर्दा चर्चामा आएका थिए । अमेरिकी भूमिमा नामेवियाविरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए । ११४ बलान उजले १०४ रन जोडेका थिए । उनले ७ चौका र ४ छक्का प्रहार प्रहार गरेका थिए । उनले शतक प्रहार गरे वापत म्यान अफ द म्याच त घोषित भए पनि टिमलाई भने जित दिलाउन सकेनन् । यो खेलमा नामेविया २७ रनले विजयी भयो ।
४. जेपी कोत्जे
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग २ मा नामेवियाको प्रदर्शनको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ । यो लिगका क्लब सेन्चुरीमा नामेवियाका पनि २ जना ब्याट्सम्यान रहेका छन् । २६ वर्षिइ विकेटकिपर ब्याट्सम्इान जेपी कोत्जे एक हुन् । अमेरिकाको घरेलु मैदानमा उनले १०९ बल खेल्दै ११ चौका र ८ छक्का सहित १३६ रन बनाएका थिए । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिगमा कुनै पनि ब्याट्सम्यानले बनाएको यो नै सर्वाधिक रन हो । बर्षाका कारण डिएल मेथडबाट यो खेलको नतिजा निकाल्दा नामेवियाले अमेरिकाविरुद्ध १३९ रनको जित निकालेको थियो । नामेवियाले क्रिकेटको विकासका लागि छिमेकी देश दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाबेसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । नामेवियालाई गत वर्ष आईसीसीले एशोसिएट मेन्स पर्फमेन्स अफ द इयरको अवार्ड दिएको थियो ।
५. सीजी विलियम्स
सीजी विलियम्स नामेवियाको राष्ट्रिय टिमका सिनियर खेलाडी हुन् । ३६ वर्षको उमेरमा उनले नामेवियाको मध्यक्रममा योगदान गर्दै आएका छन् । ओमानविरुद्ध उनले शतक बनाएका थिए । उनले ९४ बलमा १२९ रनको आक्रामक पारी खेले । उनको शतकीय योगदानसहित नामेवियाले ओमानमाथि ५२ रनको जीत निकालेको थियो । आईसीसी विश्व लिग २ मा अहिलेसम्म ६ वटा शतक बनेका छन् । नेपालसहित अमेरिका, स्कटल्याण्ड र युएईका कुनै पनि खेलाडीले शतक बनाउन सकेका छैनन् ।
लिग अन्तर्गत नेपालले अझै ३२ वटा खेल खेल्न बाँकी छ । कीर्तिपुर मैदानमा अमेरिकाविरुद्ध नेपालका विनोद भण्डारीले सर्वाधिक ५९ रन बनाएका थिए । आईसीसी लिग २ मा नेपाली खेलाडीले बनाएको सर्वाधिक रन नै यही हो । तपाईको विचारमा नेपालको तर्फबाट कसले आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग २ मा पहिलो पटश शतक बनाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कमेन्ट गर्नुहोला । -एजेन्सीकाे सहयाेगमा